မျက်ဝန်းတဝိုက်ခြောက်သွေ့ခြင်းနဲ့ညိုမည်းခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Eye masks! | CosmeticMyanmar
Home » Article » မျက်ဝန်းတဝိုက်ခြောက်သွေ့ခြင်းနဲ့ညိုမည်းခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Eye masks!
လူတယောက်နဲ့တစ်ယောက် စတင်တွေ့ဆုံတဲ့အခါ မျက်ဝန်းတွေကိုသတိထားကြည့်မိသလို ပထမဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့ အကြည့်အားဖြင့်တောင် လူတယောက်ကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပျိုမေတို့ရဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ ပျိုမေတို့ရဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေပိုမိုအသက်ဝင်လှပလာစေဖို့ရန်အတွက် Wander Beauty ကနေ Baggage Claim Gold Eye masks လေးကိုပျိုမေတို့ရှေ့မှောက်ချပြလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကိုစတင် Launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာတင်ပဲ Out of stock ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် အရေအသွေးပိုင်းအားဖြင့် အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပျိုမေတို့အနေနဲ့လည်း ဒီ New Product လေးကိုလည်း Try ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုတင် Booking ယူထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။
GIVEAWAY CLOSED! Our winner is @pheenb. Thanks to everyone who entered! ✨😍 You deserve some #SnowDay #SelfCare and we’ve got just the thing! We put together the perfect self care kit complete with our all new #BaggageClaim luxe gold eye masks, #BeachBalm in Siesta AND our #GlowGetterMist! How to win? Tag your bestie below for the chance to winakit for you andakit for your bestie! #SpaSleepovers are the best 😉 Good luck! Open to residents in the US until 1/5. Accounts must be public to enter!✨💋 Both friends must be following @wander_beauty.
A post shared by Wander Beauty (@wander_beauty) on Jan 4, 2018 at 11:12am PST
ဒီ Mask လေးကို Jojoba Seed Oil, Lavender Oil, Shea Butter တို့နဲ့ပေါင်းစပ်ဖော်စပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အသားအရေတွင်းလိုအပ်နေတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ မျက်ဝန်းတဝိုက်ချောမွေ့လာတဲ့အပြင် အရင်ကထက် Bright ဖြစ်လာတာကြောင့် မျက်ကွင်းညိုတတ်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက်တော့ ကွက်တိပဲပေါ့။ ဒါတင်မကပဲ မျက်ဝန်းတဝိုက်အသားအရေတွေကို ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာကြောင့် အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးအကြောင်းလေးတွေကိုလည်း သက်သာလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Mask လေးကိုလည်း နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြင့်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်ဝန်းတဝိုက်မှာချော်ထွက်သွားခြင်းမျိုးမဖြစ်ပဲ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသားအရေအတွင်းစိမ့်ဝင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
#BaggageClaim is here! Whether you’re recovering from late nights & early mornings or just looking to brighten your under eye area, our luxe gold foil eye masks have you covered! Global ingredients & space age technology help you travel bag-free throughout the day ✨ #SendYourBagsPacking
A post shared by Wander Beauty (@wander_beauty) on Jan 5, 2018 at 5:38am PST
အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ရွှေရောင်ဘက်ကိုအပြင်ဘက်ထားပြီး Elastic အကြည်ဖက်ကိုမျက်ဝန်းတဝိုက်ကပ်ပေးပါ။ ၁၅မိနစ် အကြာမှာဖြုတ်ပြီး မျက်ဝန်းတဝိုက်ကျန်တဲ့ Serum လေးတွေကိုအသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင် အသာအယာပုတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
Image Source : www.wanderbeauty.com
Tags: Eyes Mask